ugqozi Archives - Mytika Speak
Ikhaya / Ugqozi
Umaki - ugqozi
Isikhathi siwumbono oqonde ngqo kumuntu ngamunye. Njengalokhu, umuntu angayinciphisa noma ayisheshise njengoba efisa. Ukwehlisa isikhathi, kuzodingeka ushintshe ...
Ungathola injabulo yakho ngokuzazi wena. Isinyathelo sokuqala ukusibekela eceleni isikhathi bese uzama ukusula konke okufundile kokunye ...
Njengoba kunezinguquko ezahlukahlukene ezenzekayo emhlabeni njengamanje, kungokwemvelo ukuzizwa ukhathazekile ngokuthi impilo iphokophelephi. Kusuka esithombeni esikhudlwana ...
I-empath umuntu ongaqonda omunye ngoba bake babhekana nesimo esifanayo / esifanayo ezimpilweni zabo zamanje noma zangaphambilini. Ngokukwazi uku ...
Injongo yokuphila yinjabulo. Kwezokuphila, impilo ingabonakala njenge-movie lapho umlingisi oyedwa edlala zonke izindima. Ngokwenyama, impilo ingabonakala njenge ...
Umhlaba uyindawo yokudlala egcwele izidalwa zokukhanya nobumnyama. Kuyindawo yokuhlangana yemisebe ehlukene, lapho bakha khona amanye amazwe ngokuya ...
"Uthando nokuKhanya" kungenye indlela yenjabulo kepha wonke umuntu unezidingo nezidingo ezihlukile. Ngokwenyama, injabulo ichazwa ngumlingiswa wakho ...